Uhie okpu debere Logo ohuru tupu o mechie nnweta ya site na IBM | Site na Linux
Red Hat Inc. na-ala ezumike nká akụkọ "Shadowman" mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 dịka ọ na-abịaru nso imechi ijeri $ 34 nke IBM Corp chọrọ inweta.
N'ime onyunyo na ihe IBM ga-anata, ihe juru tech ụwa mgbe ọ kwupụtara atụmatụ ya ịzụta Red Hat na mbubreyo afọ gara aga n'ihe ga-abụ nnweta kasịnụ.
Nnweta ahụ ga-agwụ na njedebe nke afọ a Ọ bụ ezie na IBM na-ezube idobe Red Hat dị ka njirimara azụmahịa dị iche, ọtụtụ ndị nyocha kwenyere na o kwesịrị inye ụlọ ọrụ ahụ ohere ka mma ịnwe ndị asọmpi dịka Amazon Web Services Inc., Microsoft Corp. na Google LLC.
1 Red Hat na-etu ọnụ ọhụụ ọhụrụ mgbe afọ iri abụọ gachara
1.1 Mepee Brand Project, na ịchọ nke ọhụrụ imewe
Red Hat na-etu ọnụ ọhụụ ọhụrụ mgbe afọ iri abụọ gachara
Companylọ ọrụ ngwanrọ azụmahịa gosiputara akara ohuru ha n’izu a, na-ekwu na mmadụ isii n'ime ndị ọrụ ya, gụnyere onye isi ọrụ, emeela ya egbugbu.
Na mgbakwunye na ịza ajụjụ na ịnweta egbugbu logo Red Hat abụghị akụkụ pụrụ iche nke ọdịbendị nke ụlọ ọrụ ngwanrọ mepere emepe. N'ezie, enwere ndị ọrụ 17 na-egwu egbugbu nke akara mbụ.
Lovamped logo na-atụ aro Red Hat na-achọ imelite onyonyo ya ka ị na-akwado maka ụkwụ ọzọ nke njem gị.
Na a blog post, Tim Yeaton, onye isi oche ndị isi ahịa nke ahịa nke Red Hat, O kwuru na otu n’ime ihe kpatara mgbanwe a bụ na ọtụtụ ndị amaghị ihe ochie Shadowman kwesiri ịnọchite.
N'ezie, o kwesiri ịbụ ụdị nke spy spy, Mana nyocha ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na, n'eziokwu, ọtụtụ ndị lere ya anya "ihe nzuzo, ajọ omume ma ọ bụ aghụghọ."
"Mụ na ndị otu Brand nwere obi mgbawa," Yeaton dere. "Okwu ndị a agaraghị enwe isi na nnukwu mmetụta m nwere banyere okpu okpu, nke m mepụtara ogologo oge tupu mụ abanye na ụlọ ọrụ ahụ."
Akara ochie "Shadowman" ahụ dịkwa oke "njọ," Red Hat kwuru.
Ya mere, Red Hat kpebiri, dị ka otu n'ime ụwa na-eduga na-emeghe iyi software ụlọ ọrụ, malite ihe ọ kpọrọ "Open Brand Project", Nke ahụ na-emepe emepe emepe ọhụụ maka ndị ọrụ gị nke ọma.
Mepee Brand Project, na ịchọ nke ọhụrụ imewe
Meghee Brand Project dugara okike nke «Tattoo Team», nke bụ kọmitii nke ndị ọrụ Red Hat bụ ndị na-egbugbu akara ochie ahụ na ahụ ha ma rụọ ọrụ imepụta ọhụụ ọhụrụ.
Ihe ngosi ohuru a gosiputara ngbanwe Red Hat site na 'akpukpo aru' na ebe data di na igbe nke sistemu eji aru oru Linux, nye ndi n’enye ahia n’uwa ihe eji emeghe uzo maka igwe ojii ngw’oru.
Site na njirimara ọhụrụ, "anyị esila na ndò ahụ pụọ," Yeaton kwuru.
Consuelo Madrigal, onye njikwa akara Red Hat Latin America, bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ gburu egbugbu nke ohuru ohuru.
Ọ na-ekwu na ọ dịbeghị mgbe ọ bụ "egbugbu onye nzuzu" mana o kpebiri ka akara egbugbu ọhụrụ nke Red Hat. mgbe itinyechara aka na Open Brand Project, nke mepụtara akara ngosi ahụ, afọ abụọ.
"Na ọdịbendị, nke a abụghị naanị akara ngosi maka anyị Red Hatters," Madrigal kwuru. “Ọ bụ ọdịbendị anyị, ọ bụ ụzọ anyị si eme ihe, na m mụtara ọtụtụ ihe na nke ahụ, m hụkwara ya n'anya na njem ahụ niile. Ọ na-echetara anyị ihe anyị nwere ike ime ma anyị nwaa ihe ọhụrụ.
N'ikpeazụ, nsonaazụ ya, gịnị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị niile eme ya ọnụ. Obi dị m ụtọ n’ihe niile na-eme.
Ya mere Yeaton choro ndị anụtụbeghị banyere Red Hat ịhụ ọhụụ ọhụrụ n’otu ntabi nwere echiche nke ihe ụlọ ọrụ ahụ ọ bụ: ike, ntụkwasị obi, ihe ọhụụ, mepere emepe.
Ihe ngosi ohuru ohuru nke Red nwere ihe di nro di nma, karie ya na mmadu nke oge a ma di ire karie nkwurita okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Red Hat debuts logo ọhụrụ tupu IBM enweta ya